Marc Ravalomanana : Mpanadala saim-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Mpanadala saim-bahoaka
23/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Mpitari-bato vilam-bava » izay no hisokajian’ny maro ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manoloana fihetsika asehony eto amin’ny firenena ankehitriny. Saika mifanohitra amin’izay lazainy avokoa mantsy ny zavatra hataony, sy hitondrany ireo mpikambana ao amin’ny antoko Tim hatramin’izay ka hatramin’izao. Nilaza ohatra ity filoha teo aloha ity fa tsy nanao sonia fifanarahana tamin’ny fananganana ny governemantan’ny marimaritra iraisana, ny nifanohitra tamin’izay anefa no nataony. Tsy takona hafenina mantsy fa nanolotra minisitra ho mpikambana tao anatin’ny governemanta Ntsay i Ravalomanana Marc. Milaza ny tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana ny tenany, ary mikatsaka ny hisian’ny filaminanaeto amin’ny firenena. Tsy miafina amin’ny maro anefa fa izy sisa no ao ambadiky ny fitokonana eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai.
Taorian’ny fifanarahana politika nifanaovan’ireo antoko politika nandraisan’ny filoha nasionalin’ny Tim anjara, dia tsy niandry ela ny tenany nanokatra ny haino aman-jery MBS. I Marc Ravalomanana mihitsy anefa no nilaza fa tamin’ny taona 2009 rehefa nihozongozona ny sezany fa « atsahatra amin’ny fomba ofisialy ny MBS, ary atolotra ho an’ny RNM sy TVM avokoa ireo fitaovana rehetra nampiasainy » tanatina kabary niezinezina no nilazany izany tamin’ny vahoaka malagasy. Vao niongana teo amin’ny toerana anefa ny tenany, dia nitaky ny hanokafana io haino aman-jeriny nakatony io, tamin’ny mpitondra Tetezamita, ary mbola nitohy izany fitakiana izany nandritra ny fitondran’ny filoha ankehitriny. « Mampieritreritra ihany raha toa ka olona tsy manaja ny teny omeny toa izany no mbola haverina hitondra ny firenena » hoy ny mpanara-baovao sasany. Azo antoka mantsy fa raha toa ka milokaloka ny hampandroso ny firenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, dia ny mifanohitra amin’izay no tiany ahatongavana. Izany hoe tsy tena fampandrosoana no tiany ambara fa fampidirana ny firenena anaty fahantrana lalina, ary fandetehana ny vahoaka malagasy anaty fahasahiranana mangitsokitsoka indray.
Vita omaly ny atrikasa nokarakarain’ny Pnud sy ny minisiteran’ny Atitany ho an’ireo mpanao politika sy ny antoko politika eto amintsika, mba hisian’ny filaminana sy fandalana ny demokrasia eto Madagasikara, natao teny amin’ny Carlton. Miompana amin’ny ...Tohiny